पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ४ सय ९७ जनामा को’रोना पुष्टि ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ४ सय ९७ जनामा को’रोना पुष्टि !
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ४ सय ९७ जनामा को’रोना पुष्टि !
काठमाडौं – पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ४ सय ९७ जनामा को’रोना भाइ’रसको सं’क्रमण देखिएको छ । २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोग शालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा १ हजार ४ सय ९७ जनामा को’रोना भाइरस को सं’क्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
यो सहित नेपालमा को’रोना सं’क्रमित हुनेको संख्या ६९ हजार ३ सय ०१ जना पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ५७ जना सं’क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै ५० हजार ४ सय ११ जना निको भएका छन । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ४ सय ४९ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
हाल देशभर १८ हजार ४ सय ३७ जना सक्रिय सं’क्रमित रहेका छन । आज बिहिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन् । सं’क्रमित संख्या शुन्य हुने जिल्लाहरुमा सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, म्याग्दी, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, रसुवा रहेका छन् ।
तीन महिलाहरु एकसाथ पक्राउ ! पुरुषलाई रेष्टुरेन्ट बोलाएर….
६२ वर्षीय बुबाले २१ व’र्षीय छोराको छातिमा छु’री हा’नेर ह’त्या गरि घर ज’ला’ए(भिडियो सहित हे’र्नुहोस्)
नायिका श्वेता खड्काले भोली प्रेमी विजयन्द्रसँग धुमधामले विबाह गर्दै, तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको श्वेता आँफैले दिइन् जानकारी